Uzalo lusagqugqisa kumabonakude! | Ilisolezwe
Uzalo lusagqugqisa kumabonakude!
Iindaba / 12 July 2017, 10:12am / Sim Freddie
Abadlali bomdlalo uZalo kwiSABC 1 Umfanekiso: Twitter
UZALO lusathe gcobho kwindawo yokuqala kwiinkqubo ezithandwayo kumabonakude, luhlalisa phantsi ezo zifana neGenerations, Muvhango neSkeem Saam.
Ngokutsho kwamanani akutsha nje weTelevision Audience Measurement (TAMS) nakhutshwe yiBroadcast Research Council (BCC), abonisa ukuba, uZalo lunkqenkqeza phambili ngento ethe kratya ngaphaya kwezigidi ezisibhozo njengowona mdlalo ubukelwa sisininzi kumabonakude woMzantsi Afrika.
Kwinyanga ephelileyo [eyeSilimela 2017], uZalo bingowona mdlalo ubukelwayo kwiSABC 1, nakuMzantsi Afrika jikelele ngababukeli abakwizigidi ezisibhozo nesiqingatha (8,615,823).
Ukanti iGenerations: The Legacy ibihleli ezithendeni zoZalo ngababukeli abakwi-8,394, 947 yezigidi.
Le midlalo mibini kudala ixhwithana ngendawo yokuqala kumabonakude weli lizwe, ibetha iSkeem Saam esizibambele indawo yesithathu ngento engaphaya kwezigidi ezisixhenxe zababukeli.
Indumasi yomdlalo weSABC 2 iMuvhango, isengowona mdlalo ubukelwayo kwiSABC 2 nge-5, 413, 577 yababukeli, kulandele iLive Lotto Draw ngezigidi ezine. Yona i-7de Laan ihleli kwizigidi ezibini zababukeli.
Isidingo sona sihleli kwindawo yokuqala kwiSABC 3 ngesigidi esinesiqingatha sababukeli.
Umdlalo we-e.tv iScandal! ukrobe ngaphaya kwesigidi esine,i Rhythm City yona ibihleli kwi-3, 561, 978. Kusenjalo, nayo iMzansi Magic ibonakala igqugqisa ngemidlalo yayo ethandwayo. Kwinyanga aphelileyo, umdlalo wesiXhosa iGazi, ubehleli kwisigidi sababukeli, ulandelwe yi-Our Perfect Wedding nge-1,158,984 ibe ngumdlalo iSibaya nge-917, 958 emva koko ibe yiDate My Family nge-825, 072 neThe Queen nge-790, 271.